လမ်းလျှောက် ကြပြန်ပါပီ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လမ်းလျှောက် ကြပြန်ပါပီ….
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Jan 6, 2012 in Creative Writing, News | 14 comments
စစ်တွေက ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတွေက တော့ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလမ်းလျှောက် တောင်းဆိုနေကြပါပီ။သူတို့ ကျောင်းကို ပြေးဆွဲပေးနေ
တဲ့ သုံးဘီးတက္ကစီခ ကို(၄၀၀)ကျပ် အသွားအပြန် စုစုပေါင်း။တိုးမြှင့်ကောက်ခံလိုက်လို့ 
ခုလို ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကလဲ သူ့ ခံစားချက်ကို ပြောပြပါတယ်။စစ်တွေတက္ကသိုလ် ဟာခုလို ဖယ်ရီကားခနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းသားများ ချီတက်လမ်းလျှောက်တောင်းဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ ခုနောက်ပိုင်း အကြိမ်
ရေအများဆုံးပြုလုပ်နေတဲ့ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။မနှစ်က တောင်းဆိုမှုမှာတော့ ပြည်နယ် အစိုးရ
အဖွဲ့ ကနေလိုက်လျောမှုပြုခဲ့ပေမယ့်။ဒီနှစ်လို “ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခွင့်”ဥပဒေ ပြဒါန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီလ(၆)ရက်နေ့မနက်ကနေစတင်ခဲ့တဲ့ လမ်းလျှောက်တောင်းဆို ဆန္ဒပြပွဲက တော့ နေ့ လည်(၂)နာရီမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပီ။အရေးယူ၊ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်း ရှိမရှိ အတိအကျမသိရသေးပါ။
ကြိုမပြောရင် ၊ ခွင့်ပြုချက်မရရင် ဖမ်းနှိုင်တယ်တဲ့ခင်ဗျ
ရဲတွေတော့ ရှိတယ်.ဘာမှတော့ မလုပ်ဘူးပြောတယ်ခင်ည
ဖမ်းမယ်ဆီးမယ်ဆိုရင်တော့ အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့ ကိုင်တွယ်လို့ ရတယ်လေ စာရေးသူ။
ခုကိစ္စမှာ တပတ်ကြိုတင်ပြီးခွင့်ပြုမိန့် ယူသလားဆိုတာကလဲအဓိကကျနေတယ်လေ။ထူးရင်
စုပေါင်း လမ်းလျှောက်ပွဲထင်နေတာ ခုတော့ ဒီမှာက တစ်အိမ်တစ်ယောက်မလိုက်မနေရ
လမ်ေးလျှောက်ပွဲတွေ ရှိနေလို့ ပါ။ကွန်မန့် ကဘယ်လို ဖြစ်သွားပါလိမ့်။
ဖယ်ရီက ပုဂ္ဂလိက ဆိုရင်တော့ ညှိပေးလို့လဲ ရချင်မှရမှာ ထင်တယ်။
ဒီကိစ္စက လမ်းလျှောက်ပြီး မတောင်းဆိုသင့်ဘူးဗျာ တော်ကြာ ဒီလောက်တောင်လမ်းလျှောက်ချင်တာ လျှောက်ပလေ့စေဆိုပြီး ကားစီးခတွေကို မလျှော့ခိုင်းမှာဖြင့်……… စုတ်ခ…….. စုတ်ခ…..
ကျောင်းသူားလေးတွေ အတွက်လဲ ရင်မောပါတယ် ….၊
ကျောင်းစာကို အေးချမ်းစွာ သင်ကြားနိုင်အောင် ပြည်နယ် အစိုးရအနေနဲ့ အဆင်ပြေအောင်
ဒီ လင့်ခ်လေးမှာ လဲသွားဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ရွာသူားများ ခင်များ။
သေချာတာလေးတစ်ခုက ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်ပါလား။နည်းနည်းပြည့်စုံသွားတာပေါ့။သူကသတင်းဦးအောင် တင်လိုက်တော့ မပြည့်
ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီမှ စတင်ပြီး စစ်တွေ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြလျှက် ရှိကြောင်း စစ်တွေ မြို့ မှ သိရပါတယ်။ ကျောင်းသား အယောက်ငါးရာခန့် မှာ စစ်တွေ တက္ကသိုလ်မှ နေပြီး မြို့ ထဲဘက်သို့ ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြနေခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခု ညနေ ၃ နာရီခွဲ ခန့် အထိ စစ်တွေမြို့ လောကနန္ဒဘုရားနှင့် နာရီစင် တို့ အနီးတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် စုဝေး လမ်းလျှောက်နေကြပါတယ်။ကျောင်းသားအချို့ မှာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအရှေ့တွင် စုဝည်းနေကြပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ကျောင်းသားများနှင့် တွေ့ ဆုံ ညှိုနှိုင်းရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်းသိရပါတယ်။ ရဲအင်အား၇၀ ခန့် က ၀တ်စုံပြည့်ဖြင့် ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးအရှေ့တွင် ကာကွယ်စောင့်ကြပ်နေကြပါတယ်။ ကျောင်းသားများ အား အာဏာပိုင်များဘက်မှ တစုံတရာ အရေးယူမှု မရှိသေးသော်လည်း လိုက်ပါစောင့်ကြည့်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ ယခင်က ကားခများ ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများရှိခဲ့ပြီး အာဏာပိုင်များက တစုံတရာ အတိုင်းအတာအထိ အရေးယူ ဖြေရှင်းပေးခဲ့သော်လည်း ယခုအကြိမ်တွင် ယခု လက်ရှိ ၂၀၀ ကျပ်မှ ၅၀၀ ကျပ်အထိ တိုးမြှင့်မည် ဖြစ်သဖြင့် ဆန္ဒပြရခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်တွေ မြို့ ခံတဦးက ပြောပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ခုကိစ္စမှာ တက္ကသိုလ်က ပါမေက္ခအပါအဝင်၊ရဲဝန်ထမ်းတွေ၊ယာဉ်ထိန်းရဲတွေကပါ လိုက်လံပြီးအခြေအနေ
ပိုမဆိုးရအောင် ထိန်းသိမ်းတဲ့အနေအထားလောက်ပါဘဲ လို့ ကြားရပါတယ်။သုံးဘီးတက္ကစီခတွေကို အသွားအပြန်(၅၀၀)
ကျပ်သို့ တိုးမြှင့်လိုက်လို့ ခုလို တောင်းဆိုရတာပါလို့အဆိုပါကျောင်းသား ကပြောပြပါတယ်။လိုက်လျောမလားဆိုတာကို
တော့ လာမယ့် တနလာင်္နေ့ မှာ သိရပါမယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။
မပြောတတ်တော့ပါဘူး မောင်သန်းထွဋ်ဦး ရေ။
ခုချိန်ထိတော့ ဘယ်လိုအရေးယူမယ်ဆိုတာ မသိရသေးသလို။ဘယ်လောက်ထိဈေးနှုန်းလျှော့ပေးမှာလဲ ဆိုတာလဲ
တကယ်တော့ အရင်ကလိုအစိုးရကအဆောင်ပေးတာဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့။ စရိပ်မကုန်တော့ဘူး။ အဆောင်သားတွေစုမိတော့ဆန္ဒပြ၊ ဆန္ဒပြတော့ ကျောင်းသားတွေမစုမိအောင် အစိုးရကအဆောင်တွေဖြုတ်ပြစ်တော့ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန်စရိပ်ကထောင်း။ခက်တော့ခက်နေကြတာပဲ။
ငြိမ်းချမ်းစွာပညာသင်ကြားလိုသူများကို အဆောင်တွေပြန်စီစဉ်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းမှာပဲ။ အဲ.. ဆန္ဒပြရင်တော့ ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။